BINYE NGWA NGWA TAXI YANDEX MAKA GAM AKPORO MAKA N'EFU - A GAM AKPORO - 2019
Yandex Taxi maka gam akporo
Bokeh - na Japanese "na-agbagharị agbagọ" - ụdị mmetụta nke ihe ndị na-adịghị na-elekwasị anya, dị oke nfe na ebe kachasị egbuke egbuke na-abanye tụrụ. Ugboro ndị dị otú ahụ na-enwekarị ụdị disks na ìhè dịgasị iche iche.
Ndị na-ese foto iji mee ka nke a pụta ìhè n'ụzọ doro anya na-eme ka ndabere dị na foto ahụ ma tinyekwuo ihe nrịba ama dị na ya. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ụzọ maka itinye bokeh textures na foto dị mma nke mere ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma iji nye foto nke ikuku nke ihe omimi ma ọ bụ nke ọma.
Enwere ike ịchọta ederede na Ịntanetị ma ọ bụ mee onwe gị site na foto ha.
Ịmepụta mmetụta bokeh
N'ime nkuzi a, anyị ga-ekepụta akwụkwọ anyị na-ekpo ọkụ ma kpuchie ya na foto nke otu nwa agbọghọ nọ na mpaghara obodo.
A na-eji ederede ederede kachasị mma site na ihe oyiyi ehuru n'abalị, ebe ọ bụ na ha nwere ebe dị egwu anyị chọrọ. Maka nzube anyị, onyinyo a nke obodo abalị bụ ihe kwesịrị ekwesị:
Site n'inweta ahụmahụ, ị ​​ga-amụta iji chọpụta nke ọma foto nke dị mma maka ịmepụta mkpụrụ.
Oyiyi anyi kwesiri ka anyi jiri nwayo ajuju "Ọhụụ na-emetọ ala ubi". Ọ bụ na menu "Nyocha" na ngọngọ Blur.
Na ntọala nchịkọta na listi ndọpụta "Isi Iyi" họrọ ihe "Nghọtahie"na ndepụta "Ụdị" - "Octagon", sliders "Radius" ma "Ogologo ogologo" guzobe ya. Ihe nchoputa nke mbu bu oru maka ogo nke ugha, na nke abia maka ihe omuma. A na-ahọrọ ụkpụrụ na-adabere n'onyinyo, "site na anya".
Push Ok, itinye nyo, wee chekwaa oyiyi ahụ n'ụdị ọ bụla.
Nke a mezighara ihe okike.
Foto dị na Bokeh
Dị ka e kwuru na mbụ, ụdị ihe anyị ga-atụkwasị na nwa agbọghọ ahụ. Lee ya:
Dịka anyị na-ahụ, foto a nwere bokeh, ma nke a ezughị anyị. Ugbu a, anyị ga-eme ka mmetụta a dị ike ma tinyekwuo ya n'ụdị ederede anyị.
1. Mepee foto na nchịkọta akụkọ ahụ, wee dọrọ ya ederede. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-etinye (ma ọ bụ mpikota onu) ya "Na-agbanwe agbanwe agbanwe" (CTRL + T).
2. Iji wepu ebe ederede ìhè nke ederede, gbanwee usoro ngwakọta maka oyi akwa a "Ihuenyo".
3. Site n'enyemaka nke otu ihe ahụ "Na-agbanwe agbanwe agbanwe" Ị nwere ike igbanwe ederede ahụ, gosipụta ya na elu ma ọ bụ na ntanetị. Iji mee nke a, na ọrụ arụ ọrụ, ịkwesịrị ịpị aka nri ma họrọ ihe kwesiri ekwesiri na menu onodu.
4. Dịka anyị nwere ike ịhụ, nwatakịrị ahụ nwere enyo (ebe ọkụ), nke anyị na-adịghị mkpa. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a nwere ike ime ka foto ahụ dịkwuo mma, ma ọ bụghị oge a. Mee ihe nkpuchi maka oyi akwa na udidi, were brush ojii, ma kpoo akwa akwa n'elu nkpuchi na ebe anyi choro iwepu ya.
Oge eruola ka anyị lelee ihe ndị anyị rụpụtara.
Ikekwe ị chọpụtara na foto ikpeazụ dị iche na nke anyị na-arụ ọrụ. Nke a bụ eziokwu, na usoro nhazi ihe ederede gosipụtara ọzọ, ma n'ụzọ ziri ezi. Ị nwere ike ime ihe ọ bụla ịchọrọ na foto gị, na-eduzi n'echiche na uto.
Ya mere, site n'enyemaka nke ikuku, ịnwere ike iweta mmetụta ọ bụla na bokeh na foto ọ bụla. Ọ dịghị mkpa ka ị jiri textures onye ọzọ, karịsịa ebe ọ bụ na ha nwere ike ọ gaghị adịrị gị, mana ịmepụta nke gị, ndị pụrụ iche kama.